Shir Amniga ku saabsan oo Maanta Addis Ababa ka dhacay.
Waxaa maanta lagu qabtay Magaalada Addis Ababa, Shir ballaadhan oo uu soo diyaariyay Machadka Istiraatiijiyada Nabadda(I.S.A) oo ay ka soo qayb galeen Hay’adaha Amniga, xisbiyada xubno ka socday, Baarlamaanka iyo khubarro ku takhasusay Arrimaha Amniga.
Shirka oo uu ka qayb-galay Hoggaanka Arrimaha Siyaasadda iyo Xidhiidhka Faderaalka Ahna Guddoomiyaha Xafiiska ONLF ee Addis Ababa ayaa ahaa mid ay Dad badan ka soo qayb galeen.
Intii uu shirku socday ayaa waxaa goobta ka hadlay Khubarro dhanka Amniga aha oo soo jeediyay,in wax weyn laga badalo habkii hore ee loo maamul jiray Arrimaha Amniga iyo la tix-raacayo muhiimadda uu leeyahay isbadalka ka socda dalka Ethiopia,
Waxaa sidookale madasha ka hadlay Taliyaha guud ee ciidanka Ethiopia Isagoo balan qaaday, inay wax weyn ka Badali doonaan, qasabna ay tahay in lala Jaanqaado isbadalkaDalka la socda.
Hadda wixii ka Dambeeyana lala socondoono hawlaha Ay hayaan hay’adaha Amnigu iyadoona Meesha laga saarayo hab-dhaqankii Hore ee loo maamuli jiray ciidanka Ethiopia.
Geesta kale waxay soo jeediyeen xubnihii ka socday xisbiyada in si qotto dheer looga baaraan dago, habka loo hir-galinayo Hay’adaha Amniga qayba-hooda kala duwan, hadday Ahaan lahaayeen Booliska, Asluubta, Liyuu Booliska, Milatariga iyo dhammaan hay’adaha Amniga ku shaqada leh,
ONA. Addis Ababa
December 27th 2019, 4:31 am